ရေးတတ်ဘူး… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Think Different » ရေးတတ်ဘူး…	13
Posted by Yae Myae Tha Ninn on May 3, 2016 in Think Different | 13 comments
-အကြောင်းအရာက တကယ် ရီရတယ်… ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ရေးလိုက်ရင် မရီရဘူး…
-တကွက်စာ ဟာသတို့… ဖေ့စ်ဘုတ်က လေးငါးကွက်ကာတွန်းတို့ဆို ပိုဆိုး…
-အပြစ်က.. Sentence ကို ရှည်ရှည်ပဲ ရေးတတ်တယ်… စကားဆက် မနိုင်ဘူး… အကြောင်းမသိတဲ့သူဆို လိပ်ပတ်ပါ မလည်တော့ဘူး…
-စာစီပါဆို Subject + Verb + Object စီတယ်… ၏ သည် မထပ်အောင် လိုက် ဂရုစိုက်နေတယ်…
-တခါရေးပြီး တခါပြန်ဖတ်တိုင်း တခုခုလိုတယ် ခံစားရတယ်… ပြင်လို့လဲ မဆုံးတော့ဘူး…
-ထောက်နေသလိုပဲ ထင်ပြီး တကယ်လဲ ထောက်နေတယ်… လိုရင်းကို မထိမိဘူး…
ps: ပွိုင့်လိုချင်လို့ ဟုတ်ဘူး… သတိရလို့… စိတ်ထဲမလဲ ခံစားနေရတာ အမျိုးတွေဆီ ရင်ဖွင့်ချင်လို့… ဟီး…
ဦးဦးပါလေရာ says: အစားအသောက်ပိုစ့်လေးတွေလုပ်ပါဦး..
Yae Myae Tha Ninn says: ဟုတ်… ကလေးတဖက်နဲ့ သွားမစားဖြစ်တာ ကြာပြီဗျ… သွားစားဖို့ အကြွေးတင်နေတဲ့ ဆိုင်တွေ များပြီ… စမ်းချောင်းထဲမယ် ပြောပါတယ်… ဟုတ်… တင်မယ်တင်မယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 6348
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် says: ကျော်ဆို ခါတလေမှ ထောက်ဒယ်
Yae Myae Tha Ninn says: နောက်ပါနဲ့ဗျာ… အနော်က စာမရေးတတ်လို့… ထောက်တယ်ပြောပါတယ်ဗျာ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 6348
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် says: အနော်လဲ မရေးတတ် ရေးတတ်မိုလို့ခါတလေ ထောက်တယ်လို့ ပြောဒါပါ အူးလေးရာ
Ma Ma says: မရေးတတ်ပေသေးလို့ပဲ။
ဖတ်ရတာ အစကနေ အဆုံးထိ ချောနေတာပဲ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1327
Yae Myae Tha Ninn says: ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အန်တီ မမ… ထပ်လဲ ရေးဖို့ ရှိသေးလို့ အားပေးပါဦးနော်…
မြစပဲရိုး says: နင်းနင်း – သားလေးလား၊ သမီးလေးလား။
ရွာ့မြေးလေးအကြောင်း သတင်းတောင် မပေးဘူး။ အတော်နေနိုင်ပါ့။
Yae Myae Tha Ninn says: သားလေးပါ… နာမည်က ခန့်ထည်သွေးပါ… ပုံနဲ့ ပို့စ်တင်ပါဦးမယ်… အမှတ်တရပေါ့… ရန်ကုန်လာရင် ပြောနော် တွေ့ဖူးချင်လို့… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: သား က အချော လေးး အရီးးရေ..!!
နင်းနင်းး ရေ, အလုပ်တွေ ရှုပ်နေရောပေါ့…
အားတိုင်းတော့ ခနခန လာလည်ပါ..
Yae Myae Tha Ninn says: ခု စာရေးတဲ့ထဲ စိတ်ပြန်ပါလာတယ်… မရေးလဲ ဖတ်မယ်… မန့်မယ်… ကြာကြာတော့လဲ ခွဲနိုင်ပါဘူးဗျာ… ဟီး…
ပျင်းတကာ့ ထိပ်ခေါင်တင် says: အာဟေး ယောက်ခမွတျောက် တိုးပဟ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1327
Yae Myae Tha Ninn says: ဟုတ်ကဲ့ပါ… ခမည်းခမက်ရယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.